आध्यात्मिक धन, ज्ञान र शक्ति – Sunil Babu Pant – Medium
हरेक व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ। भोक लाग्दा खाने कुरा केहि नहोस्, सर माथी कुनै छत नहोस्, या भनौं दीनता-विपन्नता को दशा छ भने कुनै पनि मानिस सुखी र प्रसन्नचित्त हुनै सक्दैन । यस्तो दशामा यो स्वाभाविक नै हो कि हामी सुख प्राप्तिका लागि धनकी देवी लक्ष्मीको आराधना गर्छौं। लक्ष्मीको कृपादृष्टि हामीमा पर्ने वित्तिकै जीवनको सवै भौतिक-सुख सुलभ हुन जान्छ। फेरि जीवनयापनको साथै भविष्यको चिंता हुदैन। लक्ष्मीको अतिकृपा अतुलनिय वैभव उपलब्ध गराउंछ: बैंक, लगानि, अचल संपत्तिमा भरपूर धन थुप्रेको हुन्छ र आर्थिक मोर्चाहरु सुरक्षित हुन्छन्। लक्ष्मीको कृपादृष्टिवाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई सहि बनाई राख्ने (औषधि-उपचार, डाक्टर-वैध्य, खाना, व्यायाम आदि) साधन पनि सुलभ हुन्छ र व्यक्ति जे-मन-चाहन्छ तेही गर्न सक्छ। आनंददायक समृद्धि भनेको यही हो।
न त आर्थिक सुरक्षा र न त ज्ञान नै हामीलाई भावनात्मक संतुष्टि उपलब्ध गराउन सक्छन् । जीवनमा हर सम्पत्ति या सुविधा भए पनि यो ज़रूरी छैन कि हाम्रो आपसी संबंध सुमधुर होस्। दुनिया भरीको शास्त्र र ज्ञानको कुरा पढेर पनि यदि माता-पिता, सन्तान, मित्र या छिमेकी-नातेदारसंग हाम्रो संबन्ध राम्रो छैन बने कसरी सुख? कस्तो सुख? त्यसैले हामी शक्तिकी देवी दुर्गा को आराधना गर्दछौं। जब हामी यो भन्छौंकि “हामी शुभफलदायी संबंध विकसित गर्न चाहन्छौं” तव हाम्रो अभिप्राय यहि हुन्छ कि हाम्रो संबंध यस्तो होस् जस्वाट हामीलाई ऊर्जा मिलोस्, हामी सुरक्षित र गौरवान्वित अनुभव गर्न सकौं, जस्तै कुनै योद्धा शस्त्र धारण गरे पछि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछ। हामी कुनै अजेय (कहिल्यै नहार्ने) दुर्ग(किला:)को भांति बन्न चाहन्छौं, यसैले हामी दुर्गाको उपासना गर्दछौं । दुर्गा भावना-प्रधान शरणागार हुन् जस्को सानिध्यमा हामी सुरक्षित र वांछित हुन चाहन्छौं । दुर्गाको रूपमा शक्तिकी देवी सिंहको सवारी गर्दछिन्। ऊनी अभय हुन् र उनको हातहरुमा अस्त्र-शस्त्र सुसज्जित छन्। ऊनी हाम्रो रक्षा गर्छिन् र हाम्रालागि युद्ध गर्छिन्। हाम्रो जीवनमा दुर्गाको बड़ो महत्व छ।
आफ्नो जीवनमा दुर्गाको प्रतिष्ठा गर्नका लागि हामीले आरुलाई दुर्गा अर्थात ‘शक्ति’ प्रदान गर्नु पर्दछ। हामी स्वयंलाई सुरक्षित र सबैमा सम्मिलित अनुभव गर्नका लागि हामीले आरुको जीवनलाई सुरक्षित र परिपूर्ण बनाउनु पर्दछ। र यस्तो तब सम्म सम्भव हुदैन जब सम्म हामी अरु प्रति संवेदनशील हुदैनौं र तेरो-मेरा को भावनावाट माथि उठ्दैनौ। तेरो-मेरो को यो भावना निर्मूलनका लागि हामीलाई पुनः सरस्वतीकै शरणमा जानु पर्ने हुन्छ।